पार्टी सभापतिकै साथ लिएर सचिवमा लड्छु : सचिवका आकांक्षी बिसी - Morning Bell
पार्टी सभापतिकै साथ लिएर सचिवमा लड्छु : सचिवका आकांक्षी बिसी
Reporter	धनगढी कात्तिक २५, २०७८
क्रियाशिल सदस्यतालगायतका कारण रोकिएको नेपाली काङ्ग्रेस कैलालीको अधिबेशन यही कार्तिक २७ गतेदेखि सुरू हुँदैछ । पार्टीको १४औं महाधिवेशन अन्तर्गत हुन लागेको जिल्ला अधिबेशनको तयारी तीब्र पारिएको छ । चुनाबमा उम्मेद्वार बन्ने नेताहरू आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन कम्मर कसेर लागिरहेका छन् । प्रचार प्रसारमा जुटिरहेका छ । आकांक्षीहरू उम्मेद्वारी घोषणा गरिरहेका छन् भने केही त्यदको तयारीमा छ । यसमध्ये काङ्ग्रेस कैलालीको जिल्ला सचिवका आकांक्षी पनि खुल्नेक्रम छ । जसमा दुई दशकदेखि काँग्रेसमा क्रियाशिल तरुणदलका नेता अमृत बिसीले पनि जिल्ला सचिवका लागि उम्मेद्वारी घोषणा गरिसकेका छन् । काँग्रेस अधिबेशनको तयारी र उनको उम्मेद्वारीका विषयमा मर्निङ बेलका पुस्कर पौडेलले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, बिसीसंग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कैैलालीमा काँग्रेसको अधिवेशनको तयारी कहाँ पुग्यो ?
नेपाली काँग्रेसको १४ औँ माधिवेशनको सागरमा छौँ । हामी नेपाली काँग्रेसको १४ औँ महाधिवेशन कैलालीमा एकदम तिव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ । काँग्रेस कैलालीको अन्तिम बैठक पनि सम्पन्न भएको छ । बैठकले जिल्लामा अधिबेशनलाई सफलताका साथ रुपमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा लाग्न सबै नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको छ । बैठकमा मात्रै नभई जिल्ला भरिका १३ वटै पालिका,१० वटा प्रदेश, १२६ वटा वडा र ५ क्षेत्रका प्रमुखहरूको उपस्थित रहेको थियो । नेपाली काँग्रेसको प्रचार प्रसारलाई तिब्रता दिइएको छ ।
तपाई पार्टीको कुन पदमा उम्मेद्वारी दिने योजनामा हुनुहुन्छ ?
अब आउँदै गरेको १४ औ महाधिवेशनामा मैले पनि आफनो पृष्ठभुमि भन्नै पर्छ । नेपाल तरुण दलबाट मैले राजनीति यात्रा सुरु गरेको हो । २०५५ साल म नेपाल तरुण दलको जिल्ला सदस्य हुँदै अहिले यहाँसम्म छु । म अहिलेसम्म निरन्तर तरुण दलमै छु । पोखरामा भएको तरुण दलको अधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार भएँ । केन्द्रीय नेताहरुको गुटबन्दीका कारण त्यसले पूर्णता पाएन । र यो पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा जिल्ला सचिवमा मेरो उम्मेदवारी रहने छ। म निरन्तर पार्टीका लागि लागिरहेको छु । दिन रात नभनी २४ घण्टा पार्टीको कामले म फिल्डमै छु र मलाई कैलाली जिल्लाका सम्पूर्ण नेपाली काँग्रेसका नेताहरु लगायत सम्पूर्ण मेरा दाजुभाइ दिदी बहिनीले मलाई आशिर्वाद दिनु भएको छ ।
कुन प्यानलबाट अधिवेशन लडने सोच बनाउनु भएको छ ?
अहिले वर्तमान पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर दाइ एउटै प्यानलमा हुनुहुन्छ । शेरबहादुर दाइको जुन लाइन हुन्छ त्यही लाइनबाट म सचिव लडछु ।
कैलालीका बर्तमान पार्टी सभापति शाहबाट साथ पाउछु भन्ने आशा छ ?
आशा छ । किनभने बर्तमान सभापतिको लाइन पनि शेरबहादुर दाईकै लाइन हो । त्यसकारणले मलाई पूर्ण रुपले उहाँको आर्शिर्वाद छ ।
तपाईंको उम्मेद्वारी बार्गेनिङ्ग त होइन् ?
पटकै होइन । मेरो कुनै बार्गेनिङ्ग छैन । मलाई पार्टीका केन्द्रिय सदस्यदेखि १२६ वटै वडाका सभापतिलगायत प्रतिनिधिहरु सबैको साथ छ । र मलाई सचिवमा निर्वाचित गराउनुहुन्छ । मलाई त्यही आशा पनि छ ।
तपाई अहिले देखिने मायाले मात्रै चुनाब जित्नु हुन्छ त ?
होइन । पार्टीप्रति मेरो योगदान, लगानी, त्याग तपस्या छ । म लामो समयसम्म पार्टीमै लागिरहेको छु । अहिलेसम्म मैले कुनै पदमा आफनो उम्मेद्बारी दिएको छैन । अझै पनि भन्छु म सबल र नबिन काँग्रेस बनाउन चाहान्छु त्यसका लागि मेरो उम्मेद्धारी हो । सबैले यो कुरा बुझ्नु हुन्छ ।
तपाईले सचिवमा चितन्नुभयो भन्ने पाटीलाई के के फाइदा हुन्छ ?
म यदि पार्टी सचिवमा निर्वाचित भएँ भने पार्टीलाई सुढृढ गर्न अझ खटिनेछु । स्थानीय तह चुनाव होस वा प्रदेशको चुनाव र केन्द्रिय चुनाव होस तीनै चुनावमा कैलाली काँग्रेसमय बनाउने मेरो प्रयत्न रहने छ । फेरिपनि भन्छु यो काँग्रेसलाई मैले आफनो बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म सबल बनाउन सबै अटाउने काँग्रेस बनाउन लाग्नेछु । काङ्ग्रेसप्रती युवाको आकर्षण बढाउन पनि म क्रियाशील हुनेछु ।
अहिले काँग्रेसमा युवाहरु आर्कषण बढेको छ उनीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न के योजना बनाउनुहुन्छ ?
म आफै युवा भएका कारणले बढी भन्दा बढी युवाहरुलाई म नेपाली काँग्रेसमा आबद्ध गराउछु । सबैलाई भूमिका दिन मेरो प्रयास रहनेछ ।
तपाईकै वडा नम्बर १ मा पनि गुट उपगुट छ, त्यहाँबाट कतिको साथ पाउनुहुन्छ ?
मेरो वडा नम्बर १ मा ४११ जना क्रियासिल सदस्य हुनुहुन्छ । ३५ जना प्रतिनिधि, एउटा सभापति, ३६ जनाको प्रतिनिधि आउनुहुन्छ । उहाँहरु सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ । वडा नम्बर १ मा सम्पूर्ण क्रियासिलले माया गर्नुहुन्छ मलाई । उहाँहरुको मप्रति ठूलो विश्वास छ । किन भने उहाँहरुले मलाई तपाई नै सचिवमा आउनुपर्छ भनेर पनि भन्नू भएको छ ।
२५ कात्तिक २०७८, बिहीवार ११:०० बजे प्रकाशित
आज मौसम सफा रहने
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विरोधमा विप्लव नेकपाद्वारा नेपाल बन्दको घोषणा
रवि लामिछानेको पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता, चुनाव चिह्न– गोलाकारभित्र घण्टी
देशभर थप ५० जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पाठ्यपुस्तक अभाव गराएको भन्दै जनक शिक्षाका प्रमुखमाथि दुर्व्यवहार
डोटीको शिखर नगरपालिका पूर्ण खोप सुनिश्चित तथा दिगोपना नगर घोषणा
बाँकेमा पुनः ३ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि
धनगढी मेयर पदका स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालको अग्रता कायमै
एमाले अध्यक्ष ओली धनगढी पुगेपछि यस्तो देखियो (फोटो फिचर)
धनगढी ५ मा सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक
विपन्न महिला तथा बालबालिकालाई आर्थिक सहयोग प्रदान
मर्निङ बेल मिडिया हाउस
धनगढी १ कैलाली
Copyright © 2022 Morning Bell Daily. All Rights Reserved. Designed By MultiTechNepal